Nhọrọ Paykwụ Metgwọ Method na Urdolls
Zọ ịkwụ ụgwọ nke ụlọ ahịa Urdolls kwadoro
MasterCard gbalịsiri ike inye ndị na-azụ ahịa gburugburu ụwa ohere na ịkwụ ụgwọ ego ka mma.
Visa na-echebe nchebe nke gburugburu ịkwụ ụgwọ, na-enyocha ihe n'ụzọ dị irè, na-achọpụta ma na-egbochi aghụghọ site na teknụzụ na usoro kachasị mma, ma na-echebe data azụmahịa iji nye ndị ahịa usoro nhazi azụmahịa zuru oke na ntụkwasị obi (ikike, nhichapụ na mmezi) yana ọrụ agbakwunyere.
3.Kaadị Ebe E Si Nweta JCB
Isi kaadi JCB di na Japan ma nwekwaa ndi ahia karia nde 1.05 na obodo 22 na mpaghara. JCB bụ akara ndị Japan na-akwụ ụgwọ naanị maka ụgwọ ịkwụ ụgwọ mba ụwa ma bụrụ ndị amaara na Japan na Eshia.
Bitcoin bụ onye izizi cryptocurrency iji dekọọ azụmahịa na netwọkụ echekwara nke ọma. Amalitere ya na mbido 2009 site na onye okike amaghị ama Satoshi Nakamoto, Bitcoin bụ cryptocurrency kachasị ukwuu nke atụpụtara site na isi ahịa na ọnụọgụ data echekwara na blockcheni ya.
1 、 Họrọ omenala nkọwa.
2 、 Mgbe ịhọrọ nhọrọ nhazi, pịa Tinye na Kaadị.
3 、 Gaa na Cartzụ ahịa, ma gosi ozi ahụ wee pịa Lelee.
4 Biko dejupụta ozi adreesị gị nke ọma (ijupụta mba, mpaghara, ma ọ bụ koodu nzi ozi ezighi ezi nwere ike ime ka ọ ghara iru gị aka na nzọụkwụ ọzọ). Pịa na Gaba Ordertụ Review mgbe nkwenye. Biko jide n'aka na ozi gị niile bụ naanị maka nwa bebi ịhụnanya ga-erute gị n'enweghị nsogbu. Anyị na-ekwe nkwa na a gaghị egosipụta ma ọ bụ jiri ya maka ebumnuche azụmahịa.
5 、 Pịa na Gaba mentkwụ .gwọ mgbe nkwenye.
6 Họrọ usoro ịkwụ ụgwọ nke ga-adịrị gị mma. Wee pịa Nyefee Iwu.
7, Biko gosi usoro gị wee mezue ịkwụ ụgwọ. (Ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ akwụghị ụgwọ, biko nwaa ugboro ole ma ọ bụ họrọ usoro ịkwụ ụgwọ ọzọ nke anyị nyere. Ọ bụrụ na ịnweghị ike idozi nsogbu gị, biko kpọtụrụ anyị na service@urdolls.com, Anyị ga -aza gị n'ime awa 24.)